ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံးလူ ဘော့ဝိတ်တန် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်များ
ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံးလူ ဘော့ဝိတ်တန် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့...
2 เม.ย. 2563 - 22:20 น.
ကမ္ဘာ့အသက်ကြီးဆုံးလူ ဘော့ဘ်ဝိတ်တန်ဟာ မတ်လ ၂၉ရက်နေ့က အသက်၁၁၂နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ သူနဲ့အင်တာမီလန်ဘောလုံးအသင်းက အသက်တူတူဖြစ်ပြီး ၊ ဆဲလ်ဖရေချ့် ကုန်က်ကြီးတွေစဖွင့်တဲ့နှစ်၊ Joan of Arc ကိုတရားဝင် အခမ်းအနားနဲ့သူတော်စင်စာရင်းသွင်းတဲ့နှစ်တွေထက်လည်း သူမွေးတဲ့နှစ်ကစော ပါတယ်။
သူ လူ့ကမ္ဘာကိုရောက်လာချိန်က ဟာဘတ်အက်စ်ကွတ် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့တပတ်လိုသေးသလို ပြီးတော့ သတ္တမမြောက် အက်ဒ်ဝါ့ဒ်ဘုရင်ကြီး မကွယ်လွန်မီ ၂နှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။
ဟမ်ရှိုင်းရားနယ် အယ်လ်တန်မြို့က အိမ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ မစ္စတာ ဝိတ်တန် မွေးနေ့တွေမှာ့ဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ လူသိနည်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဟာဘတ်အက်စ်ကွတ် နဲ့သတ္တမမြောက် အက်ဒ်ဝါ့ဒ်ဘုရင်ကြီး
ရောဘတ်ကို၁၉၀၈မှာမွေးခဲ့ပြီးတော့၊အဲဒီနှစ်တုန်းက ရောဘတ်ဆိုတဲ့နာမယ်ဟာ အင်္ဂလန်နဲ့ဝေးမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေကို နာမည်ပေးတဲ့အထဲ လူကြိုက်အများဆုံး အဆင့်၁၅မှာ ရှိပါတယ်။သူ့ရှေ့မှာ ဖရန့်၊ ဟာရိုး၊ ဝီလျံ၊ ဂျွန်နဲ့ဂျော့ချ်တို့ကတော့ ထိပ်ဆုံးက လူကြိုက်များတဲ့ နာမည်တွေပါ။အဲဒီတုန်းက ရေပန်းစားတဲ့ မိန်းကလေး နာမည်တွေက တာ့ မာရီ၊ အဲလိဇဘတ်နဲ့အန်းနီတို့ပါ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုက်ဆိုင်တာကိုပြောရရင် ဒိုဆက်ဒေသ ပူးလ်မြို့ကအမျိုးသမီးကြီး Joan Hocquard ဂျွန် ဟိုကော့ ဟာလည်း ဒီနေ့မှာအသက်၁၁၂ပြည်သွားလို့သူတို့၂ယော က်ဟာ ယူကေမှာပူးတွဲအသက်ကြီးဆုံးသူ တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို သူ့လို နာမည်မျိုးပေးတာရှားတော့ Joanဆိုတဲ့နာမည် က ၁၉၀၈ခုနှစ်ကနေ ၁၉၃ဝအထိ လူကြိုက်များမှုအဆင့်၁၀၆မှာပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘော့ရဲ့၁ဝနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဗြိတိသျှတပ်တွေ အော်တိုမင်အင်ပါယာထဲကအမ်မန်မြို တိုက်ပွဲမှာ တိုက်ခိုက်မှု့အကြီး အကျယ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်ပါ။ရာသီဥတုဆိုးတာ၊ရွံ့တွေထူထပ်တာ၊ ပြင်းထန်တဲ့ ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်တာတွေခံရတာကြောင့် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ တပ်တွေ ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရပါတယ်။
ဘော့၁၉နှစ်ပြည်တဲ့၁၉၂၇မတ်လ၂၉ရက်မှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ဒေတို နာကမ်းခြေမှာ ဖြ စ်ခဲ့တာက သူစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ ကိစ္စတခုပါ။ ဆမ်ဘင်း ကုမ္ပဏီက မြင်းကောင်ရေ တထောင်အား အင်ဂျင်တပ်ထားတဲ့ ကားကို အဲ့ဒီမှာ မောင်းပြခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီကားနဲ့ မြေပြင်အမြန်နှုန်း စံချိန်တင်နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟင်နရီဆီးဂရေ့ဗ်ဟာနောက်ဆုံး မှာတော့တနာရီမိုင်၂ရာနှုန်းမောင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ မောင်းနိုင်တဲ့ မြန်နှုန်းကို သက်သေပြနိုင်ဖို့သူ၂ခေါက် မောင်းပြခဲ့ ရပါတယ်။ ပထမပိုင်းတော့ လမ်းချော်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၂ကြိမ်လုံး တနာရီမိုင်၂ရာကျော်မောင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး ပျှမ်းမျှအမြန်နှုန်း တနာရီ မိုင်၂၀၃.၉၇ မောင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် နှစ်၉၀ကြာပြီး ဘော့ သူ အသက်၁၀၉နှစ်မှာ အဲ့ဒီကားကို ဟမ့်ရှိုင်းရားပြည်နယ် Beaulieu က ကားပြတိုက်မှာ ပြသထားပါတယ်။
ဘော့ အသက်၃၀ပြည့်ခဲ့တဲ့၁၉၃၈ကို ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ပါ။ အဲဒီအချိန်ကဒီနိုင်ငံဟာ စစ်ပွဲကို ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့အချိန်ပါ။ အောက်လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံခြားကတင်သွ င်းလာတဲ့ ရော်ဘာဖိနပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြီးအကျယ်ငြင်းခုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီနှစ် ပထမ၂လမှာယူကေကို နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းလာတဲ့ ရော်ဘာဖိနပ်တွေကြောင့် ဗြိတိသျှ ဖိနပ်ထုတ်တဲ့ လူတွေထိခိုက်လာမှာကို လွှတ်တော်အမတ်တွေက စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌက ဗြိတိသျှဈေးကွက်ကို သူကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကို ဖြေဖျောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လိုပြောတာက Glaswegianလွှတ်တော်အမတ် ဂျေဂျေဒေဗစ်ဆင်က နိုင်ငံခြားကဖိနပ်တွေ သွင်းလာတာကို ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌက မထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မ နေဘူးလားလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန်မေဂျာကို မွေးခဲ့တဲ့ ၁၉၄၃ခုနှစ် မှာ ဘော့ အသက်၃၅နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ သူအသက် ၄၃နှစ် ၁၉၅၁မှာအသက်၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ့် သူကို သူ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လက်ဆွဲပြီး ဂျာထရှုဒီလော့ရင်နဲ့ယူဘရိုင်းနား တို့သရုပ်ဆောင်တဲ့ The King and I ဘရော့ဝေးပြဇတ်ကို လက်ဆွဲ ခေါ်သွားပြတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ နိုင်ပါ တယ်။ အဲ့ဒီချိန် လောရင့် တယောက် သူ့မှာ အသဲနဲ့ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းကင်ဆာရှိနေတာကို သူ့ဘာသာ သတိမထားမိပါဘူး။နောက်တော့ ဇတ်ခုံနောက်မှာမူးလဲပြီး ဆေးရုံကိုရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ၁၅လလောက်ပဲကြာတယ်၊ သူသေဆုံးသွားပါတယ်။
ဘော့ အသက်၄၇နှစ်ပြည့်တဲ့ ၁၉၅၅မှာ ပြင်သစ်က SNCFကုမ္ပဏီကကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး မောင်းနိုင်တဲ့ ရထား စံချိန်သစ် ကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီရထားက တနာရီကို မိုင်၂၀၆နူန်း အထိမောင်းပြနိုင်ခဲ့တာပါ။
၁၉၇၄ မတ်လ၂၉ရက် မှာတော့ ဘော့ သူရဲ့၆၆နှစ်မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ ဒီနေ့မှာပဲ တရုတ်ပြည် ရှီအန်း Xian မြို့က လယ်သမားတွေ ရေတွင်းတူးရင်း အရုပ်တွေအများကြီးကို မြေကြီးထဲမှာ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအရုပ်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂ထောင်၂ရာကျော်က တာရာကိုတာ စစ်တပ်ရဲ့ စစ်သားပုံတူရုပ်တုတွေလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက တော့ပြောပါတယ်။
မြေချိုင့်တွင်း သုံး တွင်းထဲကနေ စစ်သားရုပ် ရှစ်ထောင်ကျော်တွေ့ခဲ့ပြီး၊စစ်ရထားရုပ် ၁၃၀ နဲ့မြင်းရုပ် ၅၂၀ ကိုပါတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီအရုပ်တွေကို တရုတ်ရဲ့ပထမဆုံး ဧက္ကရာဇ် ကျင်ရှီဟွန်ဒီ Qin Shihuangdi သေဆုံးပြီးသွားရင် စောင့်ရှောက်ဖို့မြုပ်ထားတယ်လို့ယူဆ ကြပါတယ်။
ဘော့ အသက်၇၂နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့မှာ ၁၃၄ကြိမ်မြောက် ဂရန်းနေရှင်နယ်မြင်းပွဲကို ကျင်းပပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူဝင်လောင်းမိရင်တော့ ဘယ်မြင်းကိုရွေးရမလဲ သူ သေသေချာချာ ရွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၈ဝမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပွဲရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်မြင်း၃ဝမှာ မြင်း၄ကောင်ပဲ အပြီးသတ်ပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲ မှာ နိုင်သွားတဲ့ ချာလစ်ဖန်ဝစ်စီးတဲ့ မြင်း ဘန်နာဗစ်ကလည်းအစပိုင်းမှာ လေးဆယ်လေး တလေးပဲ လောင်းကြေးဖွင့်ပါတယ်။
၁၉၉ဝမှာတော့ ဘော့တယောက် အသက်၈၂နှစ်ရှိပါပြီ။ အဲ့ဒီနှစ်သူ့မွေးနေ့မှာ ကွန်မြူနစ်အစိုးရပြုတ်ကျသွား တဲ့ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား နိုင်ငံမှာ နာမည်သုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို လူသိနည်းတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့နာမည်က ဆလိုဗက်ကီးယားတွေကို အခွင့်အရေးညီမျှမှုမပေးဘူးဆိုပြီး ဆလိုဗက်နိုင်ငံရေးသမားတွေက ချက်ကိုစလိုဗက်ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်း ချင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကနေ ၁၉၉၃မှာ နှစ်နိုင်ငံ ခွဲဖို့ဆက်ဖြစ်လာပြီးတော့ ချက်ရီပက်ဘလစ်နဲ့ ဆလိုဗက်ရီပက်ဘလစ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘော့ ၁၀၁နှစ်ပြည့်တဲ့ ၂၀၀၉မှာတော့ အပြာကားတွေကြည့်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ အသုံးစရိတ်တောင်း တဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဂျက်ကီ စမစ် ပြသာနာတက်တဲ့အချိန်ပါ။အဲ့ဒီကိစ္စကနေသူနှုတ်ထွက်ရတဲ့ အထိဖြစ်သွားပြီး တော့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်နေရာပျောက်သွားပါတယ်။
အဲဒါပြီးတော့ ၂၀၁၁မှာလွှင့်တဲ့ ရေဒီယိုမှတ်တမ်းတခုမှာလည်း အပြာကားတွေအကြောင်း သူကတင်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၀၁၄ခုနှစ် ဘော့ ၁၀၆နှစ်မွေး နေ့က တော့ အင်္ဂလန်နဲ့ဝေးလ်စ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်တူလက်ထပ်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့နေ့ပါ ။
အသက်၁၇နှစ် လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းသား ပီတာမက်ဂရေ့နဲ့ဒေးဗစ် ကာဘရီဇာတို့ ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် အမျိုးသားချင်းလက်ထပ်တဲ့ စုံတွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘော့ အသက်၁၁၂နှစ်ပြည့်တဲ့ ၂၀၂ဝကိုရောက်လာပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေလို့ သူ့ရဲ မွေးနေ့ပွဲ လုပ်ဖို့ကိုလည်း ဖျက်ထားရပါတယ်။
သူဟာ သူ့သက်တမ်းတလျှောက်မှာ ဗြိတိသျှဘုရင်နဲ့ဘုရင်မ ၅ယောက်တက်တာ ကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီး ၊ ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ၂၂ယောက်ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်သက်တမ်း၂၇အောက်မှာ လည်းနေခဲ့ရပါ တယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန် သမ္မတ ၂၁ယောက်တက်တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ လန်ဒန်မှာ အိုလံပစ်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ ၃ကြိမ်လုံးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပြီး၊ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲ ၂ပွဲ၊ စပိန်တုပ်ကွေး၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ ရေကျောက်ရောဂါဖြစ်တာတွေကိုလည်း သူသိခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနှစ်တော့ သူ့မွေးနေ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်တာ သူကြုံလိုက်ရပြီး နောက်မှာဘာထပ်ကြုံရမလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတွေပဲ ဆက်ခန့်မှန်းကြပေါ့ ဗျာ။
อัลบั้มภาพ ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံးလူ ဘော့ဝိတ်တန် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်များ